Ririnina " Journey-Assist - Firenena mafana no miandry anao! 😉
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » wintering
Ao amin'ny fizahan-tany wintering - dia fitsangatsanganana mandritra ny 3-6 volana any amin'ny firenena rehetra "fahavaratra mandrakizay". Ny faharetana dia mamaritra indrindra amin'ny tetibola, ny toe-javatra ivelany ary ny famerana ny visa (ny antsipiriany dia hita ao amin'ireo fizarana mifandraika amin'ny famaritana ireo firenena izay tianao).
Ny vidim-piainana amin'ny firenena iray dia voafaritra mivantana amin'ny faharetan'ny: bebe kokoa ny volana tsy maintsy laninao amin'ny toerana rehetra, ny kely kokoa ny vola tsy maintsy anananao (isaky ny isan-taona).
Ny antony dia mora kokoa ny manofa trano sy manofa fiara mandritra ny fotoana maharitra. Ary koa, mandritra ny volana voalohany, ny mpizahatany matetika manomboka farafahakeliny am-panaovana sakafo any an-trano, dia mahita fivarotana mora sy tsena, kafe maharitra misy vidiny mora vidy. Fa tokony ho vonona ianao noho ny zava-misy fa mandritra ny volana voalohany mahazo aina, dia mila mandany vola be lavitra noho ny any aoriana.
Toerana malaza amin'ny ririnina
Ny ririnina any amin'ny tany mafana dia mahavita:
Ny olona manana fahaizana miasa lavitra (ny tena fidirana amin'ny Internet dia ny tena zava-dehibe.
Ny solontenan'ny asa famoronana. (mpanoratra taloha, mpamorona solosaina, mpanoratra, mpamorona ny Internet, sns).
Fizahantany iray izay misy fotoana malalaka sy fidiram-bola be tsy miankina amin'ny karama.
Ilay nahavita nanangona vola be, taorian'izay dia te hiala sasatra aorian'ny asa mafy aho.
Fisotroan-dronono mavitram-bola miaraka amin'ny vola miditra.
Na izany aza, saika misy ny olona manafana ny hatsiaka, miaraka amin'ny fandaminana mety, afaka mandany ny ririnina any amin'ny toerana mafana.
Firenena malaza amin'ny ririnina
Thailand dia iray amin'ireo firenena malaza indrindra amin'ny ririnina. Izy io dia manana toetrandro tropikaly, izay malemy indrindra eto amintsika manomboka amin'ny Novambra ka hatramin'ny Febroary. Tsy dia orana izao. Ny ankamaroan'ny mpandeha dia maniry ny morontsiraka ary mandany ny ririnina amin'ny milomano isan'andro any an-dranomasina. Ny tanàna malaza indrindra dia Hua Hin sy Pattaya, ary maro koa no misafidy ny nosy - Koh Samui sy Phuket.
Mandritra izany fotoana izany, ampahany lehibe amin'ny tetibola dia lany amin'ny fanofana trano. Ny safidy eto dia mety ho samy hafa, miainga avy amin'ny condo mora vidy mankany amin'ny villa mirongatra. Ny salan'isa amin'ny vidin'ny vidiny sy ny fampiononana dia azo antsoina hoe trano kely misaraka izay tsy misy dobo. Ny vidin'ny isam-bolana dia 250 ka hatramin'ny 400 dolara. Miaraka amin'ny fotoana hanofana ela kokoa dia mihena. Ny volavolan-dalàna momba ny fampiasana sy ny entana isan-tokantrano dia mitaky vola eo amin'ny 60 $ isam-bolana. Mazava ho azy, mahasoa kokoa ny manofa siny, noho io antony io, afaka manandrana mitady mpifanila trano ianao.
Ny fandaniana hafa - ny sakafo sy ny fitaterana dia miankina amin'ny filan'ny tena manokana. Ny fanofana moto isam-bolana dia mitentina $ 60 eo ho eo (scooter sy moto no karazana fitaterana manokana malaza eto), fiara iray - 350 $. Raha ny mahandro indrindra ao an-trano sy any amin'ny kafe tsy mihoatra ny inefatra isan-kerinandro dia azonao atao ny mampihena ny vidin'ny sakafo hatramin'ny 300 $ isam-bolana.
Raha ny fizahan-tany dia mizara Bali sy “zavatra hafa rehetra” ity firenena ity. Raha tsy te hisafidy safidy faran'izay mahery ianao, toy ny any Jakarta na mitabataba be na feno entana, na tanàna kely fanjonoana, ny safidy tsara indrindra dia ny Fr. Bali. Ny ririnina eto dia milatsaka amin'ny vanim-potoana orana, fa ny ankamaroan'ny ririnina dia tsy sosotra, satria i Bali dia nosy mamiratra izaitsizy manana rivo-piainana manokana sy fialamboly betsaka. Ary ny orana, amin'ny ankapobeny, dia fotoana fohy ary tsy miteraka fanelingelenana manokana!
Ny vidin'ny trano hofan-trano eto dia farafahakeliny $ 150 isam-bolana (efitrano fandraisam-bahiny mora vidy indrindra), ary ny ambony indrindra dia $ 2000 isan'alina (villa mihaja ao afovoan'i Jakarta). Ny dikany volamena dia azo raisina ho trano ao amin'ny vohitra kely iray, izay 20 minitra miala ny morontsiraka. 400-600 $ isam-bolana ny vidiny. Ho an'ireo izay tsy dia manandanja loatra eo akaikin'ny ranomasina dia afaka miaina lavorary amin'ny trano fandraisam-bahiny somary mahazo aina ao an-tanàna mahafinaritra any Ubud (ivon-kolontsaina Bali) ianao avy amin'ny $ 300 isam-bolana. Ankoatr'izay, ny vidiny dia efa misy ny sakafo maraina sy ny fanadiovana ny efitrano!
Raha mandoa vola avy hatrany mandritra ny volana maromaro ianao dia mety mihena kely eo amin'ny iray sy sasany ny vidiny.
Saika tsy azo atao ny mipetraka any Bali raha tsy misy fitaterana manokana. Iray volana amin'ny fanofana moto iray dia mitentina 50 $ (scooter sy moto no karazana fitaterana manokana malaza eto), fiara iray hatramin'ny 200 $. Ny elanelan'ny vidin'ny sakafo dia mitovy amin'ny trano onenana. Ny amboaram-bary nendasina amin'ny toerana sariaka dia mitentina 1-1,5 $, raha 50 hariva kosa ny sakafo hariva mahasalama ao amin'ny trano fisakafoanana
Betsaka ny fialam-boly eto, ary tsy ny rehetra no karama - afaka mankafy ny zava-mahasarika voajanahary ianao (ny natiora Indonezia dia tsara tarehy tsotra izao), mandry amoron-dranomasina tsara tarehy, ary mitsidika tempoly mahaliana.
Ririnina any India
Nandritra ny 10 taona, ny fanjakan'i Goa any India dia paradisa marina, mpizahatany an'arivony no tonga teto noho ny ririnina noho ny fety tsy misy fiafarany, vidiny mora ary ny Ranomasimbe Indiana mafana. Rehefa nandeha ny fotoana, nihena kely ny vidiny, nefa tsy dia nisy dikany izany, na teo aza ny lafiny hafa, niova i India: tsy madio tanteraka izany, fa eto kosa ny rivotra iainana malalaka.
Ny tahan'ny fanofana eto dia ambany dia ambany, na dia any Azia atsimo atsinanana aza. Mazava ho azy, ireo trano akaikin'ny ranomasina dia nanjary lafo kokoa ary ankehitriny ny hofan-dry zareo dia mitentina $ 600-1000 isam-bolana, saingy misy trano sy studio mirindra dia misy $ 15-150 isam-bolana ao anatin'ny 250 minitra miala ny morontsiraka. Voalaza eto ny fizaran-taona - amin'ny alin'ny Taom-baovao dia miakatra indroa farafahakeliny ny vidiny, noho izany antony izany no nanolorana anao ho tonga mialoha - amin'ny andro voalohan'ny volana novambra, ary avy eo mifampiraharaha avy hatrany mandritra ny fotoana fanofana manontolo.
Ny fanofana moped dia mitentina 70 $ isam-bolana (ny scooter sy moto no endrika fitaterana manokana malaza eto), ary ny sakafo dia tena mora. Eto amin'ity firenena ity, ny sakafo misy fandrahoan-tsakafo ao an-trano sy any amin'ny kafe, izay ny ampahany matetika "mahafaty", dia mitovy vidiny. Mandritra ny iray volana dia afaka mandany $ 200 amin'ny sakafo ianao, mihinana sakafo mahafa-po ary miovaova isan-karazany. Ny fitsipika fototra eto dia ny miady varotra foana tsy misy fisalasalana, tian'ny karana izany.
Na dia avo kokoa aza ny vidiny any Eropa noho ny any Azia, ny fahasamihafana dia tsy dia miharihary amin'ny dia lavitra. Amin'ny ririnina dia tsy hiasa eto ny mandry amoron-dranomasina, na izany aza, tsy mila mihazatra amin'ny toe-tsaina vahiny ianao, toetrandro tena maharikoriko, na matahotra ny famitahana ataon'ny mponina eo an-toerana (amin'ny faritra fizahan-tany). Portiogaly no tsara indrindra amin'ireo firenena eoropeanina raha oharina amin'ny tahan'ny vidiny sy ny kalitaony. Noho izany, raha tsy tianao ny tsiro aziatika dia miandry anao i Portugal
Ny lafo indrindra dia trano fonenana ao afovoan'i Lisbonne, raha any amin'ny tanàna kely akaikin'ny morontsiraka dia misy trano iray amin'ny efitrano fatoriana 1 350 mitentina XNUMX euros (anisany fitaovana). Raha afaka mandoa volana maromaro miaraka amin'ny fotoana mitovy ianao, dia mitombina ny tsy fahazoana mandeha amin'ny laoniny.
Ny mifindra any Portugal no mora indrindra amin'ny fitateram-bahoaka, raha ny vola isam-bolana kosa ao an-tanàna dia mitentina 30 euro. Ho an'ny fiara fitaterana manerana ny firenena dia mitombina ny mividy fiara efa zatra, izay mora lavitra noho ny manofa fiara vaovao.
Tany fahavaratra mandrakizay eo amin'ny nosy mampitohy an'i Amerika roa izy io. Costa Rica dia misahana manokana ny tontolo iainana. Ny fambolena dia mivoatra tsara eto, ny mponina eo an-toerana dia miavaka amin'ny hatsaram-panahiny sy ny fisokafany. Noho ny akaiky an'i Etazonia, avo kokoa ny vidiny eto noho ny any Azia, ny tapakila eto koa tsy dia mora loatra, nefa ny fiainana eto dia azo antsoina hoe tena milamina sy azo antoka.
Eto amin'ity firenena ity, manofa trano iray efitrano 1 afovoany an-tanàna dia mitentina 450 $ $. Any amin'ny faritra honenana, ny vidiny dia mazava ho azy fa ambany kokoa. Amin'ny alin'ny Taom-baovao, dia mitombo ny fangatahana, noho io antony io, mitovitovy amin'i India, dia tokony ho tonga aloha ianao.
Ny fanofana fiara eto amin'ity firenena ity dia lafo - $ 1000 isam-bolana, ka mora kokoa ny mampiasa fitaterana an-tanàna. Ny vidin'ny dia kely dia $ 1-2, lavitra - $ 10. Ny salanisan'ny saran'ny fisakafoanana misy kafe indraindray dia $ 500 isam-bolana.
Mihamaro hatrany ny mpizahatany misafidy fomba fiaina iray izay tsy hanelingelina ny asa izay tsy mandeha ao amin'ny birao. Androany, tsy mila bilaogera na mpilatsaka an-tapitrisany akory ianao mba tsy hialana sasatra fotsiny, fa miaina ao amin'ny firenena vahiny ary miasa any.
Wellness ary fitsaboana